विज्ञापन, विद्यार्थी र विद्यालय | Aaja ko Shiksha
विज्ञापन, विद्यार्थी र विद्यालय
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसइइ)को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थीहरु कक्षा ११ र १२ मा के पढ्ने होला भनेर राम्रो विषय र विद्यालय छान्न व्यस्त छन् । कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह मात्रै होइन, पूर्वविश्वविद्यालय तह पनि हो । विश्वविद्यालय तहमा जानका लागि तयारी कक्षा ११ र १२ बाटै हुनु पर्छ । भविष्यमा के बन्ने भन्ने बाटो कक्षा ११ र १२ मा रोज्ने विषयले निर्धारण गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरु राम्रा विद्यालय र विषय छान्न व्यस्त देखिन्छन् । कक्षा ११ र १२ उच्च शिक्षाको द्वार मात्रै होइन, भविष्य निर्माणको द्वार पनि हो । त्यसैले विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नुअघि त्यसको सुनौलो द्वार मानिने कक्षा ११ र १२ मा कुन विषय पढ्ने, भविष्यमा के बन्ने भन्ने निर्णय गर्न विद्यार्थीहरु दौडधुपमा रहनु स्वाभाविक हो । कति विद्यार्थी कक्षा ११ र १२ मा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिने तयारीमा समेत जुटेका छन् । एसइइ पछि कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुनका लागि कुन क्षेत्रको विषय रोज्ने भन्नेमा विद्यार्थीको आफ्नो रुचि, एसइइ परीक्षामा ल्याएको ग्रेड, घरको आर्थिक अवस्था र परिस्थितिमा निर्भर हुने गर्दछ । अहिले गरिएको सहि निर्णयले भविष्यको बाटो खुल्दछ ।
आजका विद्यार्थीले जे पढ्छन् भोलि त्यहि बन्छन् । देखासिकीमा छनौट गरिएका विषयले न राम्रो शैक्षिक सफलता दिन्छ न त भविष्यमा त्यो कामै लाग्छ । त्यसैले कक्षा ११ र १२ को विषय र विद्यालय छनोट गर्दा धेरै विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । हतार र लहैलहैमा छनोट गरिएको विद्यालय र विषयले भविष्यमा पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । भविष्यमा राम्रो अवसर पाउन विद्यार्थीहरु सोहि अनुसारको विषय छनौट गरी पढ्नुपर्ने हुन्छ । पहिले आफ्नो क्षमता के हो, भविष्यमा के बन्ने हो, पारिवारिक आर्थिक अवस्था के छ, भविष्यमा रोजगारीको अवस्था के छ सबैको निधो गरेर मात्रै विषय र विद्यालय छान्नु उपयुक्त हुन्छ । अधिकांशको विद्यार्थीको चाहना र लक्ष्य विज्ञान विषय पढेर भविष्यमा डाक्टर र इञ्जिनियर बन्ने हुनसक्छ । कतिपयको व्यवस्थापन संकाय पढेर भविष्यमा कुशल व्यवस्थापक बन्ने चाहना राखेका पनि हुनसक्छ । कसैलाई शिक्षा पढेर भविष्यमा शिक्षक बन्ने त कसैको प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि हुन सक्छ । रुचि र इच्छाले मात्रै हुँदैन, अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।
कक्षा ११ मा विद्यालय छान्दा पहिले त्यसको शैक्षिक वातावरण हेर्न जरुरी हुन्छ । शैक्षिक सस्थाको वातावरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने कस्तो वातावरण छ ? शिक्षक कस्ता छन् र शिक्षण विधि कस्तो छ ? यी धेरै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अभिभावकहरुले पनि आफू वा आफ्ना सन्तानको शिक्षालाई समाजमा फूर्ति देखाउने, पैसाको तुजुक देखाउने कुरामा उपयोग गर्नु हुँदैन । आकर्षक विज्ञापनको लहैलहैमा लागेर वा अग्ला र ठूला घर मात्र हेरेर हतारमा विद्यालय छान्दा फुसर्दमा पछुताउनु पर्ने हुन्छ । ठूला–ठूला विज्ञापन, तडक भडक हेरेरभन्दा पनि त्यहाँको शैक्षिक वातावरण हेरेर नै विद्यालय छान्नु वेश हुन्छ । विज्ञापनका आधारमा मात्रै विद्यालय छान्दा झुक्किएला, विषयअनुसारका विद्यालय, पढाइ अनुसारका पाठशाला ! अनि मात्र वर्तमानको बुलन्द विद्यार्थी र भविष्यका भर बन्न सकिएला ।